QuickPic nwetara ihe eji emepụta ihe | Androidsis
QuickPic na-enweta òkè ya nke Ihe eji eme ihe na ụdị ọhụụ [APK]
QuickPic bụ ngwa ihe onyonyo kacha mma Android maka ngwa ndị ọzọ. Ọ nọnyeere anyị kemgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmalite gam akporo ma mara ka esi etinye onwe ya na nde kwuru nde ngwaọrụ gburugburu ụwa. Icheta afọ mbụ nke gam akporo, ị ga -emerịrị ya wepu na ngwa a ikike ịlele onyonyo niile ngwa ngwa nke m nwere na nchekwa dị n'ime, ebe ọ bụ na ekwentị ụfọdụ ngwa nke Google maka ebumnuche a adaala ma ọ bụ arụghị ọrụ dịka mmadụ chọrọ.
Otu afọ a, onye nrụpụta ya kwuputara na ọ bụ na -arụ ọrụ n'ụdị ọhụrụ nke ga -eweta ihe ọhụrụ dị mkpa na nhazi ahụ, dịka o mere ụnyaahụ mgbe mmelite ya na akụkụ nke ihe eji arụ ọrụ bidoro yana na site ebe a anyị nwere ekele maka mbata, ebe ọ chọrọ mmegharị n'echiche a (dịka ọ na -eme WhatsApp).
1 Lollipop QuickPic
2 Ịlaghachi n'ike ha
Enwere m ike ikwu nke ahụ n'ikpeazụ QuickPic enwetala ihe nrụpụta n'ime imewe ya, ihe ọtụtụ ndị ọrụ toro ogologo oge na onye nrụpụta ya malitere ịrụ ọrụ. Ma ka ọ na -enweta akụkụ nke Lollipop Material Design, Quickpic nwere ike bụrụ nke dabara adaba ugbu a n'ihi na ụdị ọhụrụ a nke Android naanị ụzọ ị ga -esi lee ihe onyonyo bụ iji Foto, nke nwere njikọ chiri anya na Google+.
Ozugbo anyị bidoro ngwa anyị nwere ike hụ ngwa ngwa ụfọdụ akara ngosi nke ga -enye anyị ihe ọ Quickụ Quickụ QuickPic niile, kpọmkwem akara ngosi dị n'akụkụ igwefoto, nke si na ya pụta anyị nwere ike ịhazi echiche nke folda onyonyo niile nke anyị nwere, na -ahọrọ ọtụtụ ụdịdị: ndabara, nchịkọta, taịl, ndepụta na onye nyocha. Ọrụ ihe nchọgharị ikpeazụ a ga -enye gị ohere ịmaba n'etiti folda niile nke ọnụ na ọtụtụ ngwa ndị ọzọ kpebisiri ike ịrụ ọrụ a.
Anyị ga -enwe ike banye na igodo akụkụ, n'agbanyeghị na ihe anaghị agbanwe nke ukwuu ebe a, kama ihe ngosi ọhụrụ na akara ngosi pụtara, na -enwe olile anya na ha ga -aga n'ihu na -emelite ngwa ahụ ma na -emeziwanye interface ahụ na nkọwa ọhụrụ.
Ịlaghachi n'ike ha
QuickPic na ụdị ọhụrụ a na -alaghachi n'ihe ọ bụ site n'ọdịdị ọhụrụ bụ ngwa na -eji ịdị elu ya elu nke ahụ dịkwa n'ịntanetị ruo oge na -agba taa na gam akporo. Ma ọ bụrụ na ị bịarutere na gam akporo n'oge na -adịbeghị ma etinyebeghị ngwa gallery a, egbula oge ime nke a n'ihi na ọ gaghị emechu gị ihu. Ngwa nke pere mpe, dị nfe, nwee ọmarịcha interface yana na -arụ ọrụ dị ka ihe ọ bụ, onyonyo onyonyo iji nweta gigabytes foto nke anyị ga -echekwa na ọdụ.
Budata ngwa ngwa QuickPic
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » APK » QuickPic na-enweta òkè ya nke Ihe eji eme ihe na ụdị ọhụụ [APK]
Kacha mma ụlọ elu agbachitere saga laghachi na Alaeze Rush: Origins
Unboxing, Benchmarks na ihe atụ nke foto ewere na Meizu MX4 Pro